धन अथवा पैसाको रुप::Hamrodamak.com
धन अथवा पैसाको रुप
- | डा. लेखनाथ न्यौपाने
धन अथवा पैसा हरेक मानिसलाई जीवन जिउने आधारको रुपमा संसारभर लिइन्छ । समयसँगै पैसाको महत्व एकातर्फ वढेको छ भने अर्का तर्फ पैसा भएर पनि जीवन झनै कष्ट दायक र एक्लो हुँदै गएको देखिदैछ । साथमा भएको पैसाको सदुपयोग र उपभोग गर्ने मानिसको अभावमा धन कसैका हातमा गएको या धनको गलत उपयोग भएको हामीले देखिरहेका छौ । पैसा अथवा धन चलायमान हो र यो कसैको निर्देशनमा मात्र रहन सक्दैन । यसको रुप भनेको समय र आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भइरहन्छ ।
आजको जस्तो पैसाको आविस्कार नभएको प्राचिन समयमा पैसाको माध्यम वस्तु साटासाट थियो । आफुसँग भएको वस्तु अर्कालाई दिएर ऊ सँग भएको वस्तु आफुले लिने कुरा त्यो समयको आवश्यकता र सुरुवात थियो । गाईवस्तुसँग सामान साटासाट घ्यू, दुध दही, कृषिबाट उत्पादित वस्तु उन अदिलाई पैसाको माध्यम बनाउदा बनाउदै सर्व प्रथम माटो, ढुङ्घका सिक्का प्रचलनमा आए । क्रमश छालाका अनि धातुका सिक्का गर्दै कागजका नोट आए । नेपालमा कागजका नोट २००२ सालमा सूरु भएको थियो ।
लेखक: डा. लेखनाथ न्यौपाने
विभिन्न अध्यायन र खोजबाट नेपालीहरु खुसी रहने कुरामा छिमेकी देश भन्दा केहि अगडी देखएका छन् । तर, आजको पैसामोह र पैसाको दुरुपयोगले आउने दिनमा नेपालीहरुमा खुसी रहने स्थान घटने देखिन्छ । खुसी रहन पैसा जम्म पार्नुमात्र होइन । पैसाको सही सदुपयोग पनि हो । पैसालाई सही सदुपयोग गर्न जानियो या सकियो भने यसले मानिसलाई सहि बाटोमा हिडाउछ र अझधेरै पैसा कमिने बाटो तर्फ डोर्याउछ । यदि जानिएन भने त्यही पैसाले कंगाल पनि बनाउछ ।
धन या पैसाका तीनवटा रुप हुन्छन् । यी तीनवटा रुपको नियम वुभ्mने हो भने हामी कोही गरिव भएर वस्नु पर्दैन् । पहिलो त धन या पैसा चलायमान वस्तु हो । यो एकै ठाउँमा वस्न सक्दैन । त्यसैले पैसालाई चलायमान राख्न र त्यसबाट फाइदा लिन आफुसँग भएको धेरथोर पैसा कुनै सानो उधोग, इलम या कुनै नाफा आर्जन गर्ने व्यापारमा लगायो भने पैसाले पैसा कमाउछ । यो व्यवसायमा लाग्दा या भएको पुजी लगाउदा तपाइको व्यवसायमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यदि हरेक संक्षम मानिसले या पौसा भएकाहरुले रोजगारी केहि व्याक्तिकालागि भए पनि सिर्जना गर्ने हो भने बेरोजगारको संख्या घटन सक्छ । यसले देशलाई कर पनि तिर्न सकिन्छ अनि आफु पनि स्वाबलम्बन बन्न सकिन्छ भने आप्mनो तर्फबाट थोरै मानिसलाई नै भए पनि रोजगारी दिन सकिन्छ । यो भनेको एउटा नागरिकले देशका लागि गर्ने सबै भन्दा राम्रो काम हो र यही नै साँचो धर्म पनि हो । यतिमात्र नभएर तपाईको व्यापार या उधोग वढ्दै जादा अरु धेरै रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ भने तपाइको नाम सुवास पनि फैलिदै जान्छ । र यो भनेको खुसी रहने मुख्य आधार पनि हो । किनभने तपाइले प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो परिवारलाई आफ्नै देशमा अड्याउनु भएको छ ।
दोस्रो तपाइले सरकारलाई कर तिर्नु भएको छ । यो भनेको नागरिकको दायित्व हो भने देश विकास गर्ने आधार पनि हो । यतिमात्र नभएर यदि तपाइले कसैलाई रोजगारी पनि दिनुभएको छ भने तपाई कसैको जिविकोपार्जनको मियो पनि बन्नु भएको । यतिमात्र होइन, तपाईको व्यापार व्यवसाय या उधोगमा कच्चा सामान या अन्य सामान आपूर्ती गर्नेले पनि अप्रत्यक्ष रुपमा फाइदा लिइरहेका हुन्छन् या उनीहरुको पनि जीवन यापनमा तपाइको योगदान रहेको हुन्छ । यति गर्ने मानिसले भगवानको आर्शिवाद पाइरहेका हुन्छन । इश्वरले जनीनजानी गरेका पापको पनि माफी दिन्छन् । र यस्ता मानिसले पाप काटन तिर्थ व्रर्त गर्नु पर्दैन । उसले जानी नजानी समाजको सेवा गरिरहेको हुन्छ । तर, आफुले गर्ने कार्यमा अनावश्यक लोभ मोह भने रहनु हुदैन । यदि यस्तो रह्यो भने तपाइको व्यापार व्यवसाय या उधोग लामो टिक्दैन र तपाई कंगाल पनि हुनसक्नु हून्छ । त्यसैले असल सोच नै तपाइको समृदिको आधार हो ।
पैसा या धनको पहिलो रुपले नै संसार यति धेरै अगाडी वढेको छ । मानिसहरु परिश्रम गरेर उधोगी व्यापारी असल कृषक बन्न सफल भएका छन् भने लाखौ करोडौ मानिस रोजगार भएका छन् । यदि तपाईसँग प्रसस्त धन छ या तपाइले चाहेमा केहि धन निकाल्न सक्नु हुन्छ जो तपाइको दैनिकीमा पर्दैन या तपाई त्यो धन या पैसा बेगार पनि बाच्न सक्नुहुन्छ भने त्यो धन कुनै परोपकारी सस्थालाई दान गर्नुहोस ताकी तपाइकोमा थन्किएर रहेको धनले असाहय असक्त या एकल वृद्ध वृद्धा अनि दन्दमा परेका या बाबुआमा गुमाएका या प्राकृतिक प्रकोपमा परेका मानिहरुले आस्रय या भोजन पाउन । अनि उनीहरुको पनि रोजी रोटीको बाटो बनोस । यो तपाइको ठूलो सेवा हुनेछ । यदि तपाइले यो गर्न सक्नु भयो भने पनि तपाइले जीवनमा गरेका पापहरु नास हुनेछन् । जे भए पनि तपाइले अरुको सेवामा आप्mनो धन लगानी गर्नुभयो । यदि तपाइसँग उधोग खोल्ने पैसा छैन दान गर्ने पैसा पनि छैन भने तपाई सामज सेवक बन्नुहोस । कुनै राम्रो कामको अभियन्ता बन्न्ुहोस । यो पनि तपाइको साँचो सेवा हो जसले अरुलाई पनि राम्रो कुराको प्रेरणा दिने छ । हामी नेपाल या विश्वका धेरै सामाजिक अभियान्ता या उधोगपतिका उदाहरण लिनसक्छौ । जसले उधोग धन्दा कलकारखाना खोलेर रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । सरकारलाई ठूलोमात्रामा कर तिरेका छन् । उनहरुको देश विकासमा ठूलो योगदान रहेको हुन्छ । यतिमात्र नभएर उनहिरुले विश्वका विभिन्न ठाउँमा ट्रष्ट या सहायता केन्द्र खोलेर लाखौ मानव तथा पशुप्राणीको सेवा गरिरहेका छन् । अझ ठूलो मात्रामा विभिन्न संघसस्थालाई दान दिइरहेका छन् । तर, उनीहरुको वास्तिवीक वाल्यकाल भने दुःख र पीडामा वितेको हुन्छ । त्यही दुःख र पिडा नै उनीहरुको जीवनको प्रेरक तत्व बन्न जान्छ ।
यदि हामीले सोच्ने हो भने हामी जन्मदा खालि हात आएका हुन्छौ । मर्दा पनि खाली हात जान्छौ । यही जन्मनु र मर्नु विचको समय हाम्रो हो । यो समय भनेको राम्रो र असल काम गर्नलाई हो । अरुको सेवा गर्नु र बाटो विराएकाहरुलाई सही बाटोमा ल्याउनु हो । आफु पनि बाच्नु हो र अरुलाई पनि बचाउनु हो । यदि तपाई अरुको भलो चिताउनु हुन्छ भने तपाइको भलो चिताउने अरु नै हुन्छन् । यदि तपाइले काम गर्दा गर्दै गलत गर्नुभयो भने पनि माफी पाउनु हुन्छ । तपाइको एउटा गल्तिले राम्रो पाठ सिकाउछ । तपाई फेरी गल्ती गर्न डराउनु हुन्छ । यी हुन असल सोच र कामका फाइदा । यसले तपाइलाई समाजको एउटा असल मानिसको रुपमा उभ्याउने छ । र तपाईका सन्तान र समाजका लागि पनि एउटा उदाहरण बन्न सक्नु हुनेछ । अनि तपाइले आर्जन गरेको सम्पती पनि त यहीका मानिसको परिश्रम र लगानी त हो । यहाँकै मानिसको मेहेनत त हो । यो सम्पती तपाइको स्थायी पनि त हुँदैन । यदि ताइले कुनै दान या सहि सदुपयोग गर्नु भएन भने दुरपयोग गर्नेका पनि यो संसारमा कमि छैन् ।
अन्त्यमा, धनको तेस्रो रुप भनको धनको नासहुनु हो । यदि तपाइले जीवनमा धन मात्र संचय गर्नुभयो । त्यो धनलाई सही ठाउँमा सदुपयोग पनि गर्नु भएन, उधोग धन्दा या व्यापारमा पनि लगाउनु भएन् अनि दान पनि गर्नु भएन । तपाइको धन त्यसै रही रह्यो भने त्यो धन तपाई जिवित हुँदै या तपाइको मृत्यु पश्चात कुनै फटाहाले उडाएर सक्ने छ । तपाईका सन्ततीले पनि राम्रोसँग उपभोग गर्न पाउने छैनन् । यो नै प्रकृतिको या धनको नियम हो । त्यसैले समयमा नै हामी सबैले विचार पुर्याउनु पर्छ । खुसी मोज आनन्द अनि रमाइलो हामीमा निर्भर हुन्छ । कोही रक्सी पिएर आनन्द लिन या खुसी खोजी रहेका हुन्छन् । कोही पर रुत्री गमनमा खुसी खोजीरहेका हुन्छन् । कोही अरुलाई नराम्रो देखाएर चोरी डकैती गरेर खुसी खोजीरहेका हुन्छन् । कोही अथाह सम्पती जम्मा गरेर खुसी खोजरहेका हुन्छन् । कोही बलात्कार हत्या अपहरण जस्ता नराम्रा काममा खुसी या धन खाजी रहेका हुन्छन । तर त्यस्ता क्रियाकलापले खुसीले न त तपाईमा स्थायी शान्ति ल्याउन सक्छ न त तपाईका सन्तानले त्यो खुसी प्राप्त गर्न सक्छन् । स्थायी खुसी र शान्ती ल्याउन त धन या पैसाको सही गुण वुझेर काम गर्नु पर्छ र सही ठाउँमा सही तरिकाले उपभोग गर्नुपर्छ । यो नै धनको अन्तिम सत्य हो
सोम, चैत्र १९, २०७४ मा प्रकाशित
सरकार हैन संस्कार परिवर्तनको खाँचोे
राणा शासन, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र हुँदै आज हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा आएका छौँ। ’जनताको, जनताद्वारा र जनताकै हितका लागि बनाइएको शासन प्रणालीलाई लोकतन्त्र भनिन्छ’ भनेर अब्राहम लिङ्कनले भनेका थिए’रे। खैर, यहाँ सम्म आइपुग्नलाई हाम्रा...
संसारका सारा सुखको सुरुवात र समाप्ति आमाको मायामा हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले सुनेका मात्र छैनौँ, धेरैले अनुभव पनि गरेका छौँ। आमा अर्थात हाम्रो जननी, सृष्टिकर्ता। विभिन्न कवि, लेखक, साहित्यकारहरुले आमाको गरिमाका बिषयमा थुप्रै कुरा...
सर्वेन्द्रको रहस्यमय मौनता र खरेलको सम्झना !
सूर्य बस्याल मंगलबार पोखरामा फेरि एउटा बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भयो । अब सायदै कुनै यस्तो बार नहोला, जुन दिन नेपालमा बलात्कार र हत्या नभएको होस । देशनै हल्लाएको कञ्चनपुरकि १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्या...
पाकिस्तानी पीएमका पहलहरु प्रेरणादायक
-रमेश ढकाल पाकिस्तान तेहरिक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टीका प्रमुख तथा राष्ट्रिय क्रिकेट टीमका पूर्व कप्तान इमरान खानको नेतृत्वमा गठन भएको पाकिस्तानको नयाँ सरकारको जग हाम्रो देशको दुई तिहाई बहुमत सहितको सरकारको तुलनामा निक्कै नै कम्जोर होला।...
के अचेल मनाउने जस्तै हो त तीजको वास्तविक रुप ?
सविता सापकोटा नेपाली नारीहरुको महान चाड तीज । तीजसँगै माईती गाउँ आउने चेली । सासूको रुखो वचन, नन्दको होच्याउने प्रबृत्ति, जेठानीको हेपाहा बोली, यस्तै पीर मर्का फुकाउने जमघट बन्दै आएको छ तीज । “ आफूलाई...